> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado Photos ka Camera Canon EOS 6D
Waxaan soo kaban karto, tirtiray Photos ka Canon EOS 6D?
Hi, waxaan qaatay badan oo sawiro leh oo aan camera Canon EOS 6D. Markii aan go'aansaday inaan iyaga nuqul in aan computer, inta badan sawirada waxaa ku jiray sawirada anna waxaan soo qaaday maanta tageen. Laakiin waxaan weli u sheegi kartaa in ay sawiro la waayay ayaa kor u qaadan meelaha adigoo guryaha ku kaadhka xusuusta. Kuwa sawirada lumay dhan yihiin oo ku saabsan qoyskeyga. Baryayaaye, ii sheeg waxa dhacay iyo sida aan sawiro aan dib ugu heli karaan. Thanks ka hor.
Haa aad xaq u leedahay. Sawirrada waayay ayaa weli on camera aad. Waxa ay tixgeliyaa sida xogta soo geli karin nidaamka iyo doonaa, waxay noqon kuwa khasaaray weligiis kaliya marka ay overwritten by xog cusub oo ku saabsan camera ama kaadhka xusuusta ay. Tani waxay suurtogal ah in aad ka bogsato sawiro ka xeerkoodu EOS 6D haddii aad joojiso isticmaalka camera ama kaadhka xusuusta ay tan iyo sawiro ayaa laga badiyay.
Waxaa jira barnaamijyo badan oo soo kabashada sawir Canon EOS 6D ee Internet-ka ee ikhtiyaarkaaga. Wondershare Photo Recovery ama Wondershare Photo Recovery for Mac waa mid ka mid ah ugu kalsoonaan karo oo ugu awood badan iyaga ka mid ah. Waxa aad bixisaa xal loo helo inuu ka soo kabsado lumay / formatted / tirtiray / sawiro laga aad camera Canon EOS 6D. Ka sokow, haddii aad rabto in aad dib u soo ceshano photos lumay ama files audio ka Canon EOS 6D, qalab this waa faa'iido aad.
Waxaad kala soo bixi kartaa version maxkamad barnaamijka si ay u bilaabaan soo kabashada sawir Canon EOS 6D hadda ah!
Kabsado Photos ka Canon EOS 6D in 3 Talaabooyinka
Kasta oo isbedel yar ku camera ama kaadhka xusuusta ay overwrite laga yaabaa sawirada lumay, sidaa daraadeed waxa aad u muhiim ah in uu ka tago camera aad keligaa markii photos yihiin laga badiyay.
Hadda waxaan ku tusi doonaa sida inuu ka soo kabsado sawiro ka Canon EOS 6D la Windows version of Wondershare Photo Recovery.
Tallaabada 1 ka dib rakibidda iyo ordaya codsiga on your computer, aad arki doonaa interface ah muujinayaa qalabka taageeray oo dhan. Fadlan guji "Next" badhanka si ay u bilaabaan soo kabashada sawir Canon EOS 6D.
Fiiro gaar ah: Waxaad u baahan tahay in ay ku xidhmaan aad camera Canon EOS 6D ama kaadhka xusuusta la your computer.
Tallaabada 2 Markaas barnaamijka qor doonaa maqaal qoruhu on your computer. Waxaad dooran kartaa mid ka mid ah si aad u camera 6D oo guji "Scan" si loo ogaado photos lumay it on.
Tallaabada 3 Ka dib iskaanka, waxaad soo kaban karto sawiro tirtiray ka Canon EOS 6D hadda. Waxaad ku eegaan karo sawirada asalka ah si loo hubiyo sida badan oo sawiro noqon kartaa celiyo ka camera Canon EOS 6D.
Ugu danbeyn, kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan sawirada aad rabto in aad dib u soo ceshano oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya, si aad u computer.
Sidee inuu ka soo kabsado Photos ka Canon PowerShot ELPH 300 HS